China GDCL-10kA Impulse Yazvino Jenareta Manufacture uye Fekitori |HV Hipot
●Environmental tembiricha: -10 ℃ kusvika 40 ℃
●Hunyoro hunoenderana: ≤ 85% RH
●Kureba: ≤ 1000m
●Hapana guruva rinoita, hapana moto kana ngozi inoputika, hapana simbi inoparadza kana gasi rekudzivirira.
●Simba voltage waveform is sine wave, distortion rate <5%
●Kuramba kwepasi hakupfuuri 1Ω.
IEC60099-4: 2014 Surge Arresters-Chikamu 4: Metal-oxide surge arresters pasina mapundu e ac systems.
GB311.1-1997 Insulation kurongeka kweHV Simba kufambisa uye shanduko.
IEC 60060-1 Yakakwira Voltage Yekuyedza Tekinoroji- General Yekuyedza Chinodiwa.
IEC 60060-2 Yakakwira Voltage Yekuyedza Tekinoroji - Measurement System.
GB/T16896.1-1997 Digital Recorder yeHigh Voltage Impulse Test.
DLT992-2006 Kuita Mitemo yeImpulse Voltage Measurement.
DL/T613-1997 Matekinoroji ehunyanzvi ekuunzwa kunze kwenyika AC gapless metal oxide arresters.
Nekushandisa LC uye RL maseketi, iyo inochaja capacitor C inoburitsa kune isina mutsara resistive mutoro kuburikidza neiyo inductance L uye kushorwa R kuburitsa iyo impulse ikozvino inoenderana neyakajairwa zvinodiwa.
●Yazvino waveform: 8/20μs
●Kuyerwa ikozvino: 10kA
●Ignition nzira: Pneumatic displacement discharge bhora kure.Automatic control, manual control.
●Current polarity: positive.Waveform kuratidza: ikozvino-negative;residual voltage-positive.
●Ikozvino kuyerwa: Rogowski coil (0-50kA), kunyatsoita: 1%.
●Residual voltage kuyerwa: kuramba voltage divider (0-100kV), kunyatsoita: 1%
●Yese kuyerwa kwechokwadi: 3%
●Waveform kuratidza: Oscilloscope (Tektronix) uye PC.
●Iyo oscilloscope uye capacitor yekuchaja voltage inoiswa paPC nekiyi imwe.
●Kuchengetedza data: paPC.Yekuyerwa data uye waveform inounganidzwa neoscilloscope, uye inotumirwa otomatiki kuPC kuburikidza ne USB port, uye inochengetwa seExcel fomati mune preset folda pane komputa hard disk.
●Kudzivirirwa kwekuchengetedza: over-voltage, over-current, access control linkage, emergency stop, automatic grounding.Akashongedzerwa nemanyorero ekudzika bhaa: vashandi vekushanda vanofanirwa kuburitsa neaya yekumisa vasati vasangana nejenareta muviri, kutsiva waveform resistor, kutsiva chinhu chekuyedza, kugadzirisa, nezvimwewo, uye kubatanidza bhara rekudzika kumucheto weHV wemuviri.
●Kuramba kwepasi: ≤1Ω
●Simba rekushandisa: 220V ± 10%, 50Hz;simba 10kVA
1) Kuchaja nzira: hafu wave rectification uye inogara iripo muLC wedunhu pa transformer primary side.Rutivi rwekutanga rune pfupi-sekiti / over-load kudzivirira.
2) High-voltage rectifier diode: reverse voltage 150kV, Max.Avhareji yazvino 0.2A.
4) Kuchaja inodzivirira inodzivirira: iyo enameled kuramba waya ine inductively dense ronda pane insulation chubhu.
5) Inogara iripo yekuchaja mudziyo: mukati me10 ~ 100% yakayerwa yekuchaja voltage, inogadziriswa kurongeka kwekuchaja voltage ndeye 1%, uye chaiyo yekuchaja iko kuri nani kupfuura 1%.
6) Voltage yekutarisa ye capacitor: DC inopikisa voltage divider inoshandisa girazi uranium kuramba uye simbi firimu kuramba.Iyo voltage chiratidzo cheyakaderera-voltage ruoko inoendeswa kune yekuyera sisitimu neyakavharirwa tambo.
1) Auto grounding mudziyo: kana bvunzo yamiswa kana chero chimwe chikonzero chinoita kuti kutonga kwekupinda kuvhurwe, iyo yakakwira voltage terminal inogona kuisirwa otomatiki neinodzivirira uye nekukasira kuburitswa.
2) Chishandiso chekuburitsa chinotora pneumatic solenoid valve kupatsanurwa uye nzira yekumisa, iyo ine compact chimiro, yakasimba yekufambisa kugadzikana uye yakavimbika chiito.
3) The discharge sphere inogadzirwa ne graphite ine simba rakasimba rekudzivirira uye kuramba kune yakakura ikozvino.
1) Mana ekuchengetedza simba capacitor akakamurwa kuita mapoka maviri uye akaiswa pane insulated chassis bracket zvichiteerana.Wave-front inductance uye wave-end resistance inogadziriswa munzvimbo dzinoenderana, dziri nyore, dzakajeka, dzakasimba uye dzakavimbika.
2) Kusunga mudziyo wechinhu chekuyedza unosimbiswa nepneumatic pusher.
3) Chishandiso chekubatidza chinotora zvinhu zvepneumatic kufambisa iyo yakasarudzika bhora chinhambwe uye kuburitsa nepaburi rebhora, iro rakagadzikana uye rakavimbika.
1) Residual voltage: resistance voltage divider, non-inductive resistance, high precision, Max.voltage ndeye 30kV, ine 1pc 75Ω yekuyera tambo, 5metres.
2) Yazvino: Kushandisa Rogowski coil ine yakakura ikozvino ye100kA uye 1pc 75Ω yekuyera tambo, 5metres.
3) Oscilloscope: Kushandisa Tektronix DPO2002B, sampling rate ye1GS / s, 100MHz Broadband, nzira mbiri.
4) Software: yakashongedzerwa ICG impulse ikozvino kuyerwa system, ine data uye waveform kuverenga / kuchengetedza uye kuverenga mabasa.
1) Tafura mhando Workbench inoita kuti vashandi vekushanda vashande vakagara, zviri nyore.
2) Kabati yakashongedzerwa nemakasitiri anofambiswa uye yakatsigirwa rutsigiro, iyo inogona kufambisa kufamba uye kugadzirisa chinzvimbo.
3) Yakanyanya dhizaini yekudzora system, mushandisi-inoshamwaridzana interface, chete 3 mabhatani (charge, discharge, ignition) uye bhandi switch (mana waveform kutendeuka), kuvimbika kwepamusoro, chimiro chakareruka, nyore kushanda, nyore kuchengetedza.
4) Oscilloscope setting inodzorwa nekombuta uye inopedzwa nekiyi imwe chete, iyo inodzivirira kuoma kwemanyorero ekushandisa (oscilloscope ine mabasa mazhinji, izvo zvakaoma kune vasiri nyanzvi kudzora).
5) Capacitor yekuchaja voltage inodzorwa nekombuta, ine yakajeka interface uye nyore kushanda.
6) Iyo oscilloscope inomisikidza chinongedzo chekutaurirana nekombuta, iyo data yekuyera uye waveform inochengetwa otomatiki mukombuta, uye gwaro reExcel rinogadzirwa otomatiki.
7) Simba rekushandisa rekutonga system: rakaparadzaniswa neshanduro uye sefa.
8) Dziviriro: over-voltage, over-current, access control linkage, emergency stop, automatic grounding, etc.
Chiyero Analysis Software
Iyo yekuongorora software yakagadziridzwa yeimpulse yazvino bvunzo inogona kuverenga otomatiki waveform uye data kuburikidza nekutaurirana neoscilloscope uye kuongorora waveform zvinoenderana neyeyero nzira yeIEC1083-2 yakajairwa.Yazvino peak, voltage peak, wave-mberi nguva uye wave-yekupedzisira nguva inoverengerwa otomatiki uye inoratidzwa pakombiyuta skrini pamwe chete nebvunzo waveform.
Dhata uye waveform inogona kuchengetwa otomatiki uye nekuenderera (kupfura nekusarudzika panzvimbo yekuyedza)
Zvakapfuura: Hipot Tes Set neAutomatic Control
Zvinotevera: AC hipot bvunzo yakagadzirirwa insulated boom GDYD-137
Ikozvino Impulse Generator
Impulse Voltage Uye Yazvino Yekuyedza System
Impulse Voltage jenareta China
Pulse Jenareta Mutengo
Yakachena Wave jenareta
Sine Wave Jenareta Ic
Sine Waves jenareta
Square Pulse Wave jenareta
Nhanho Pulse jenareta
Voltage uye Pluse jenareta
Voltage Impulse jenareta